Olee otú Play MKV Files na Nexus 7
> Resource> Video> Olee otú iji tọghata MKV ka Nexus 7 n'ihi na Ezigbo playback
Ana m enwe a nsogbu mgbe m nyefee MKV faịlụ ka m Nexus 7. Oge ọ bụla m na-agbali na ya, m na kọmputa na-ekwu "Windows Explorer kwụsịrị na-arụ ọrụ." Otú ọ dị, m na-adịghị ihe ọ bụla nsogbu ndị ọzọ na faịlụ (AVI, MP4, wdg) ma MKV faịlụ. Onye ọ bụla aka?
Yeah, ọ bụ a na-enwekarị nsogbu. MKV bụ mgbagwoju akpa ma ọ bụ faịlụ Ọkpụkpọ nke bụ ike jide otu akparaghị ókè ọtụtụ audio, video, oyiyi na ọbụna ndepụta okwu na otu otu faịlụ. Nexus 7 nwere ogbenye ma ọ bụ obere ndakọrịta na MKV faịlụ Ọkpụkpọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ igwu ihe MKV faịlụ na Nexus 7, ị ga-tọghata MKV ka Nexus 7 si dakọtara formats tupu ọ bụla faịlụ enyefe. The Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac)-ukwuu tụrụ aro na nke a. Nke a software bụ nnọọ ngwa ngwa na mfe na converting gị MKV faịlụ (gụnyere HD 1080P MKV) na Nexus 7 n'ụzọ zuru ezu na-akwado usoro, site kpọmkwem àjà gị kachasị usoro (na wuru na-presets) maka chọrọ ngwaọrụ.
Dum ime ga na-ewe ruo 3 mfe nzọụkwụ! Dị nnọọ na-eso nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu n'okpuru. Tupu na, biko ibudata na wụnye Wondershare Video Ntụgharị.
Nzọụkwụ 1: Import MKV faịlụ ka MKV ka Nexus 7 video Ntụgharị maka akakabarede
Nzọụkwụ 2: Họrọ Nexus 7 dị ka mmepụta format
Nzọụkwụ 3: Play MKV on Nexus 7
Ndị ọzọ MKV converters
Pịa bọtịnụ (dị ka e gosiri) na-agagharị na bulite gị MKV faịlụ. Ma, i nwekwara ike ozugbo ịchọta ndị MKV faịlụ na ị chọrọ si obodo ndekọ na mgbe ahụ ịdọrọ-na-dobe ha n'elu interface. Mgbe ahụ, ị ga-ahụ ndị na uploaded MKV faịlụ egosipụta na video thumbnails.
Cheta na: E nwere ihe a faịlụ ụzọ na ala nke interface. The converted faịlụ ga-akpaghị aka echekwara na nchekwa ndabara. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe faịlụ ụzọ, dị nnọọ pịa "..." bọtịnụ na nyegharịa gị họọrọ ụzọ ma ọ bụ faịlụ aha.
Dị nnọọ ahụ wuru na-preset (kachasị kasị mma ntọala) maka Nexus 7 ma họrọ ya dị ka mmepụta usoro. Iji na-eme na, dị nnọọ pịa Ngwaọrụ nri mgbe mmepụta Format. Mgbe ahụ, sub-udi nke ndị ọzọ. Egbu, pịa Nexus 7.
Dị nnọọ amalite MKV faịlụ ka Nexus 7 si video akakabarede site ọkụkụ tọghata bọtịnụ na ala-nri akuku nke a usoro 's isi interface. Nke a software ga mezue video akakabarede ruo 30 ugboro ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla ọzọ Ntụgharị na ị na-eji tupu na lossless mma. Mgbe ọ mere, a ga-a mmapụta ozi apostle gị na ihe aga-eme e dechara.
Mgbe akakabarede, ị nwere ike ịchọta ma ọ bụ weghachite converted faịlụ dị ka faịlụ ụzọ (dị ka e kwuru Nzọụkwụ 1) ma ọ bụ site ọkụkụ Open nchekwa bọtịnụ. Ọzọ, nyefee ndị a faịlụ gị Nexus 7 site eriri USB. Ọ ga-nnọọ mfe mgbe ị kwesịrị ịrụ ndị ọzọ akakabarede.
Nzọụkwụ 4: Ndị ọzọ MKV converters
Ị nwere ike agbalị mgbe nile ọzọ MKV converters dị ka Freemake Video Ntụgharị, MPEG Streamclip ma ọ bụ MediaCoder dị ka onye ọzọ. Ndị ọzọ karịa Freemake Video Ntụgharị, ndị ọzọ uzo ozo na-dakọtara maka download na nwụnye na ma Windows na Mac ịwa PC. N'akụkụ akakabarede, ị nwekwara ike iji Freemake Video Ntụgharị ike slideshows si foto gị na collection. The MPEG Streamclip, na aka nke ọzọ,-enye gị ohere iji tọghata ma muxed ma ọ bụ demuxed faịlụ yana encode ha ka ha ọzọ faịlụ ụdị maka playback on a nhọrọ nke obere ngwaọrụ. Nanị na-ezo n'okpuru maka a nseta ihuenyo nke MPEG Streamclip si interface.
Ọ bụrụ na ị na-achọ elu arụmọrụ na àgwà, MediaCoder gị ga-abụ mma nzọ dị ka ọ na-enye gị ọnwụ onu nke transcoding ikike. Ọ bụghị n'ezie pụtara maka beginners ka set nke na-eme mgbanwe parameters nwere ike mfe mmiri iri ị ma na ị nwere n'ezie ndidi na-aga trough ya ma ọ bụ na-achọ iji nweta a ọhụrụ set nke nkà. Eziokwu, unflattering interface-eme ka ọ na-erughị na-adọrọ adọrọ tụnyere ndị ọzọ converters.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị nwalee ụfọdụ online Ntụgharị, lelee na anatara nke online converters dị. Ọ bụ nwụnye-free dị ka niile conversions ga-eme online. N'ihi ya, gị njikọ Ịntanetị nwere na-ma nnọọ otu ebe ma ọ bụ ị ka mma tọghata gị faịlụ na-abụghị ọnụ ọgụgụ kasị elu awa. Ma, ị ga-akasiakde n'ime gị PC nke ndusụk ini ruo mgbe ọ completes akakabarede. Otú o sina dị, ọ bụ a mara mma n'ụzọ kwụ ọtọ akakabarede ma ọ bụrụ na ị naanị ole na ole faịlụ na aka na-achọ akakabarede.
Olee otú Bee MOD Files